Web Service and Web application အကြောင်းဆွေးနွေးပေးပါ။ - MYSTERY ZILLION
Web Service and Web application အကြောင်းဆွေးနွေးပေးပါ။
January 2010 edited January 2010 in PHP
Mz မှ အစ်ကို အစ်မ များခင်ဗျာ။
Web service and Web application အကြောင်းလေးကို အကျယ်တ၀င့်လေး ဆွေးနွေးပေးပါခင်ဗျာ။ ဘယ်ဟာ က ဘယ်လို အသုံးပြုသလဲ သိချင်လို့ပါ။ ဘယ်ကောင့်ကို ဘယ်လို အခြေနေတွေမှာ အသုံးချ သလဲ သိချင်ပါတယ်။
Web application ဆိုတာကတော့ web ပေါ်မှာ run တဲ့ application ပါ။ Zohoo, Google docs အပြင် web အတွက် ရေးထားတဲ့ application တွေကို web application လို့ခေါ်လို့ရတယ်။ ornagai လည်း web application လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်။
ကျတော် ကောင်းကောင်း နားမလည် သေးဘူးဖြစ်နေတယ်။ နောက်ထပ် တစ်ခေါက်လောက် ရှင်းပြပေးပါလား။
web service ဆိုတာက service ပေးတာပါ။ ငါဒါလိုချင်တယ်။ မင်းဆီမှာ ငါဒါကို အသုံးပြုလို့ရအောင် register လုပ်ထားတယ်။ ဒါ ငါ့ API KEY။ မင်းဆီက ရထားတာ။ ဟိုဘက်က ဟုတ်တယ်။ မင်း API key မှန်တယ်။ မင်းလိုချင်တာ ဒါမဟုတ်လား။ ရော့ယူ ဆိုပြီး ပေးတယ်။ အဲဒါပဲ။ SOAP , oAuth, REST တွေက ရှင်းဖို့က ကျွန်တော်လည်း ကောင်းကောင်း မရှင်းပြတတ်ဘူး။ oAuth, REST ကတော့ အခုမှ စမ်းနေတုန်း။
Twitter ဆိုရင် REST ကော oAuth ကော သုံးတယ်။ REST က သာမာန် Login ဝင်စရာမလိုတဲ့ ဟာတွေမှာ သုံးတယ်။ Latest Status ယူတဲ့ဟာတွေပေါ့။ oAuth ကတော့ Login ဝင်ဖို့ အတွက်သုံးတယ်။ oAuth က user တွေအနေနဲ့ Main site မှာ login သွား ဝင်တယ်။ User တွေအနေနဲ့Username နဲ့ password တွေကို client site တွေမှာ ထည့်ပေးစရာမလိုတဲ့အတွက် စိတ်ချရတယ်။ ဘယ်အပိုင်းကို သိချင်တာ။ ဘာကို သိချင်တာလဲဆိုတာ တစ်ချက်လောက်ပြောပြရင်တော့ ထပ်ရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ SOAP, oAuth, REST တို့ကိုတော့ wiki မှာ အကြမ်းသဘောမျိုးလောက် ဖတ်လို့ရတယ်။
ကျတော်က ဒီလိုနားလည် ထားတယ်...
ဥပမာ . Facebook မှာဆိုရင် Game တွေ အများကြီးပါတယ်။ အဲဒီ Game တွေက သာမာန် web programming နဲ့ ရေးလို့ မရဘူးဗျာ။ အဲဒါကို တခြား java ဖြစ်ဖြစ် c ဖြစ်ဖြစ် ရေးထားမယ်ပေါ့။ အဲဒီ အခြေနေမှာဆိုရင် ကို ရေးလိုက်တဲ့ဟာက my application ဖြစ်သွားပြီပေါ့။ အဲဒါကိုမှ web site မှာတင်ချင်တယ်ဆိုတော့ my application ကနေ web application ကိုပြောင်းဖို့ အတွက် web service ကို အသုံးပြုတာလို့ ကျတော်က နားလည် ထားတယ်။ အဲဒီ အတွေးက မှန်ပါသလား။
facebook မှာရေးချင်တယ်ဆို၇င် fbml ကို သုံးပြီးတော့ ရေးရမယ်။ အဆင်အပြေဆုံးကတော့ PHP နဲ့fbml ကို တွဲသုံးပြီး ရေးတာပေါ့။ အဲလိုရေးဖို့အတွက် အရင်ဆုံး facebook မှာ API key ယူရတယ်။ API key ရပြီးတော့မှ PHP ကနေဆိုရင် facebook phplibrary နဲ့ fbml ကို သုံးပြီးရေးရတယ်။ app run တာကတော့ ကိုယ့် host မှာ။ ပြတာကတော့ facebook ကနေပေါ့။ API နဲ့ FBML က အလုပ်လုပ်သွားပေးတာပါ။ API ဆိုတာက facebook နဲ့ ကိုယ်ရေးထားတဲ့ API ကို ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးတာပါ။ အဲလို ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက် ကိုယ်က facebook site မှာ app register လုပ်ရတယ်။ အဲဒီ အခါ API key ရလာမယ်။ API key ရမှ ဆက်သွယ်လို့ရမယ်။ API key ဆိုတာက security သဘောမျိုးနဲ့ သုံးတာပါ။ ဥပမာ API ကို အသုံးပြုပြီး facebook မှာ ၅ မိနစ် တစ်ခါ post တွေ အလိုအလျောက်တင်နေလို့ရတယ်။ အဲဒီအခါ facebook က ခွင့်မပြုဘူးဆိုရင် ဘယ် API က လာတယ်။ အဲဒီ API ကို ဘယ် user က register လုပ်ထားလဲဆိုတာကို သိပြီး ban လိုက်လို့ရတယ်။
oAuth က နည်းနည်းရှုပ်တယ်။ နည်းနည်းပိုရှင်းတဲ့ AuthSub ကို ပြောတာ ပိုကောင်းမယ်။ AuthSub ဆိုတာက google ရဲ့ နည်းပညာပါ။ oAuth ကို အခြေခံထားတာပဲ။ user တွေရဲ့ contact list ကို site တစ်ခုကနေ ယူတော့မယ်ဆိုပါဆို့။ အဲဒီလိုအခါမှာ user ရဲ့ username နဲ့ pwd ထည့်ရမယ်။ အဲဒီ site က ယုံကြည်စိတ်ချရမှု ရှိချင်မှရှိမယ်။ အဲလိုမျိုးတွေအတွက် oAuth ပေါ်လာတာပါ။ AuthSub က oAuth ထက် ပိုရှင်းအောင် လုပ်ထားပေးတယ်။
Google Contact list ကို web site က request လုပ်လိုက်ရင် google website ကိုရောက်သွားမယ်။ google website မှာ user က login ဝင်။ ဝင်ပြီးတဲ့အခါမှ google က ဒီ site က contact list ကို တောင်းနေပြီ။ မင်းပေးမှာလားလို့ မေးရော။ ကိုယ်က ပေးလိုက်လို့ပြောတဲ့အခါမှ google ကနေ ပေးလိုက်တာ။ အဲဒီ အခါမှာ လာခဲ့တဲ့ site ကိုရောက်သွားရော။ အဲဒီအတွက် session token ပို့လိုက်တယ်။ username နဲ့ pwd တော့ မပို့ဘူး။ session token ဖြစ်တဲ့အတွက် အချိန်အကြာကြီးမရတဲ့အတွက် username နဲ့ pwd ကို site က ခိုးလို့မရတော့ဘူး။ user အတွက်လည်း စိတ်ချရတယ်။ site အတွက်လည်း user ရဲ့ ယုံကြည်မှုကိုရတယ်။
တနည်းပြောရင် သာမာန် web programming နဲ့ပဲ ရေးရတာပဲ။ facebook app လည်း သာမာန် web programming နဲ့ပဲရေး၇တာပဲ။ သက်ဆိုင်ရာ API function တွေကိုတော့ ယူသုံးရတယ်။ ဥပမာ။ facebook API function ကနေ friendlist တွေရနိုင်တယ်။ user information တွေရနိုင်တယ်။ register လုပ်တယ်ဆိုတာက user information ရဖို့ပဲ။ facebook connect သုံးလိုက်တော့ user လည်း register လုပ်စရာမလိုတော့ဘူး site ကလည်း information ရတယ်။ အဲလိုမျိုး web service တွေက အလုပ်လုပ်ပေးတာ။
ဥပမာ။ ။ ကျွန်တော် လက်ရှိရေးနေတဲ့ ornagai ဆိုပါဆို့။ API ကတော့ ရေးနေဆဲ မပြီးသေးဘူး။ API register လုပ်ထားတဲ့သူက ornagai ရဲ့ စာလုံးတွေကို အခြား site ကနေ retrieve လုပ်လို့ရတယ်။ ကျွန်တော့် site ကို လာစရာမလိုပဲနဲ့ API function ခေါ်ပြီး retrieve လုပ်လို့ရမယ်။ အဲဒီအတွက် အခြား site တွေကလည်း စာလုံးတစ်ခုကို mouse ထောက်လိုက်တာနဲ့ ornagai dictionary API ကို ယူပြီး ornagai ကနေ စာလုံးရှာပြီး return ပြန်လာမယ်။ ပြန်လာတဲ့စာလုံးကို ရေးထားတဲ့ app ကနေ ရယူပြီး ပြန်ပြီးပေးတယ်။
Google Map API ကို အသုံးပြုပြီးတော့ မြေပုံပေါ်မှာ ပုံတွေထည့်တာ point တွေထည့်တာ စတာတွေလုပ်လို့ရတယ်။
ဆိုရင် Google Map API သုံးပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံက မြို့တွေကို point တွေနဲ့ ချထားတာ။ အဲလိုလုပ်ဖို့ google map api key ကို အရင်ဆုံး ယူရတယ်။ API key တစ်ခုက register လုပ်ထားတဲ့ site ကပဲ ခေါ်လို့ရတယ်။ http://map.etelegram.net.mm/ က API key ကို http://map.mymap.com.mm ကနေ ခေါ်လို့မရဘူး။ API key တစ်ခု ရယူဖို့က တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုမတူဘူး။ Google Map ဆိုရင် site ပဲလိုပေမယ့် facebook ဆိုရင် facebook user ဖြစ်ရမယ်။ သုံးမယ် website လည်းလိုတယ်။
ဒါပေမယ့် Twitter အသုံးပြုတဲ့ REST လိုကျတော့ ဘာမှ မလိုပြန်ဘူး။ oAuth လိုတဲ့အပိုင်းရှိသလို မလိုတဲ့ အပိုင်းရှိတယ်။ user တစ်ယောက်ရဲ့ tweet တွေကို ထုတ်ကြည့်ချင်ရင် twitter ကပေးထားတဲ့ REST web service ကနေ ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်။ ဘယ် site ကနေ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ် app ကနေ ဖြစ်ဖြစ် ထုတ်ယူလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့် status တင်တော့မယ်ဆိုရင် oAuth လိုအပ်ပါတယ်။ oAuth သဘောတရားက AuthSub သဘောတရားနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ SOAP ဆိုတာက ထပ်ရှိသေးတယ်။ SOAP ကတော့ အခုချိန်မှာ ခေတ်သိပ်မရှိတော့ဘူး။ သုံးတဲ့လူလည်း တော်တော်နည်းသွားပြီ။
API တွေ web service တွေကြောင့် ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ sync တွေ လုပ်လို့ရလာတယ်။ ဥပမာ Google Calendar ဆိုပါဆို့။ Google Calendar က online ပဲရတယ်။ App တစ်ခုရေးပြီး Google Clanedar API ကို ယူသုံးလိုက်ပြီး data တွေ အကုန်ဆွဲချလိုက်လို့ရတယ်။ နောက်ပြီးတော့ APP မှာ ထည့်ထားတာတွေကို Google Calendar API ကနေ တင်ပေးလိုက်လို့ရတယ်။ Syn လုပ်ပြီးသွားရင် Google Calendar မှာရှိတာတွေနဲ့ ကိုယ့် app မှာရှိတာတွေနဲ့ အတူတူဖြစ်သွားပြီ။
ဒီလောက်ဆို၇င် web service , web API တွေအကြောင်း နားလည်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
ကျတော်နားလည်ထားတာ မှားနေတာကို ပြန်ပြီးတော့ ပြင်ပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အစ်ကိုက အားလုံးကို အသေးစိတ်သိနေတော့ လေးလဲ လေးစားပါတယ်။ လေ့လာ အားထုတ်မှူကိုလဲ ချီးကျူးပါတယ်။
ဒါဆိုရင် အစ်ကိုပြောသလိုဆိုရင် Facebook Game တွေကို user တွေက ရေးထားတာပေါ့။ သူတို့က Facebook မှာ API Key ယူပြီးတော့။ သူတို့ Local မှာ သူတို့ Game ကို Install လုပ်ပြီး။ Interface မှာ Facebook ကို ယူသုံးထားတာပေါ့။ ကြားခံနယ်ကို API နဲ့ အသုံးပြုတာပေါ့။
နောက်ပြီး တစ်ခုနားမလည်တာက web site ကနေ (Gtalk,MSN,Yahoo..etc) ချက်တွေတက်လို့ရတယ်ဗျာ။ သူတို့က Google TalK ဆိုရင် Google connect ကိုသုံးလိုက်တယ်။ ဒါဆိုရင် Google Server ကို အဲဒီ ၀က်ဆိုက်က သွားချိတ်ရမှာပေါ့။ အဲဒီလို ချိတ်တဲ့ဟာကို Authsub နဲ့အသုံးပြုတယ်လို့ဆိုတာလား။ အဲဒီ web site က Google Connect သုံးဖို့ အတွက် Google မှာသူက ဘာတွေ သွားလုပ်ရလဲ။ နောက်ပြီး ကိုရိုက်လိုက်တဲ့ username and password က လုံခြုံစိတ်ချနိုင်မလား။ ကျတော် အခုနားလည် တဲ့ ပုံစံမှန်လား။ ကျတော် အခုမှ စပြီးလေ့လာနေတာမို့ပါ။ အခုလို အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သူတို့ Local မှာ သူတို့ Game ကို Install လုပ်ပြီး။
သူတို့ server မှာ Game ကို Facebook API သုံးပြီးရေးထားတာပါ။
Gtalk တို့ MSN , Yahoo messenger တွေကို XMPP ကိုသုံးပြီးရေးတာပါ။ သူတို့က username နဲ့ pwd ပေးမှရတယ်။ API မလိုဘူး။ user က username နဲ့password ကို မဖြစ်မနေ ပေးရတယ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရ မရကတော့ site ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ AuthSub က Gdata API တွေနဲ့Google Apps API တွေမှာ အဓိကအသုံးပြုတာပါ။ messenger တွေမှာတော့ အဲလို သုံးလို့မရပါဘူး။
Hi! I'm admin of Ju fan page on facebook.
I use static iframe tab application to add tabs on my page.
I want to know how to add comment boxs/ share links like in the following image.
It's from Thittsarni fan page.
Please tell me what application to use to write codes like this. Thanks!
seem like facebook comment . you will need to get app key and app secret to fill the form . furthermore you may need to look around developer.facebook.com. Depending on you system , it may easier or harder . For example , if you use wordpress , you may just need to install plugin related to it and doalittle configuration mainly setting up app key and app secret. but lately facebook demand for you phone number ( Myanmar still not allow ) or credit number to identify .